बुटवलमा दुर्घटना भर्खरका दुई युवकको गयो ज्यान – KhabarTime
असार १३, काठमाडौं: दुर्घटनामा परेर हिजो राती बुटवलमा दुई जना युवकले ज्यान गुमाएका छन् । बुटवलको रामनगर भन्ने ठाउँमा भएको दुर्घटनामा दुई जना युवकको मृत्यु भएको हो ।
बुटवल कालिकानगरका २१ वर्षिय सुशील कुँवर र सियारी गाउँपालिका ६का अमुवाका २२ वर्षीय रोशन गुरुङ्गको दुर्घटनामा मृत्यु भएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय वुटबलले जनाएको छ । रोकेर राखेको ट्रकमा अर्को गाडी आएर ठोक्कि दा दुर्घटना भएर उनीहरुको ज्यान गएको हो ।
प्रहरीका अनुसार रामनगरमा रोकेर राखेको ना. ६ ख ६२४ नम्बरको ट्रकमा विपरित पुर्वबाट आइरहेको बा. १४ च ६९७९ नम्बरको गाडीठोक्किएर दुर्घटना भएको थियो । दुई ना युवक गम्भिर घाइते भएपछि अस्पताल लगियो । तर, उनीहरु बाच्न सकेनन् । दुर्घटनामा उनीहरुको दुःखद निधन भएको छ ।
काठमाडौंः नेपालमा थप एक जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ । चितवनको भरतपुर अस्पतालमा उपचार गराईरहेका कोरोना संक्रमित एक पुरुषको मृत्यु भएको हो । योसँगै नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या २८ पुगेको छ ।
अस्पताल का अनुसारकैलाली को गोदावरी नगरपालिका ७ का ५० वर्षीय पुरुषको शनिबार विहान ६ः ३५ बजे मृत्यु भएको हो । शुक्रबारबाट उनको अवस्था झन झन गम्भिर भएपछिउनलाई आइसोलेसनबाट आइसियुमा सारिएको थियो । तर, आज बिहानै उनको मृत्यु भएको छ ।
स्टाफ नर्सको मोडल बन्ने सपना बुन्दै आस्मा !